यि बलिउड सेलिब्रेटी जसको मातृत्वमाथि नै शंका - Kendrabindu Nepal Online News
बलिउडमा आफ्नो कामको बलमा पहिचान बनाउनु सजिलो कुरा होइन । पहिचान बनाएर पनि त्यही उचाईमा टिकिरहनु झन महत्वपूर्ण कुरा हो । धेरै कडा मेहनत र संघर्षको कारण उनीहरुले सेलिब्रेटी स्टाटस हासिल गरेका छन् । ऐश्वर्य राय, करिना कपूर लगायतका अभिनेत्रीहरुले नेम र फेम कमाउनको लागि निकै मेहनत गरेका छन् ।
यि बलिउड अभिनेत्रीहरु प्रोफेसनल लाइफसँगै पर्सनल लाइफ पनि उत्तिकै राम्रोसँग सम्हालिरहेका छन् । उनीहरुले बच्चा हुर्काएर फेरि बलिउडमा कमब्याक गरिसकेका छन् । वर्किङ वुमनको लागि बच्चालाई राम्रो हेरचाह गर्नु भनेको उदाहरणीय काम हो । तर उनीहरुलाई बच्चा हुर्काउने मामलामा चुकेको भन्दै आलोचित बन्नुपरेको छ । को–को भए त आलोचित ?
मिस वर्ल्डको ताज पहिरिसकेकी ऐश्वर्य रायले बलिउडमा धेरै हिट फिल्म दिइन् । यसैकारण उनले सबै दर्शकहरुको माया र साथ पाएकी छिन् । तर जब उनले छोरी आराध्यालाई जन्म दिईन् । उनी लगातार ट्रोलको शिकार हुन थालिन । उनको बढेको तौल र आराध्यालाई हुर्काउने क्रममा सोसल मिडियाहरुमा आलोचनाको शिकार हुन पुगिन । उनी जहाँ पुग्थिन आराध्याको हात समातेर पुग्थिन् । छोरीको लागि चाहिने भन्दा बढी प्रोटक्टिभ भएको र छोरीलाई सहज नछाडेको भन्दै आलोचित बनिन ।
करिना कपूर खानः
करिना कपूर खानले आफ्नो छोरा तैमुर अलि खानलाई हुर्काउने क्रममा सोसल मिडियाबाट धेरै प्रकारका प्रश्नको सामना गर्नुपरेको थियो । सबैभन्दा पहिला तैमुरको नामको लागि करिना र उनको पति सैफ अलि खान ट्रोलको शिकार भएका थिए । बच्चा हेर्नेले तैमुरको हात समाएर हिडेको तस्बिरमा करिना निकै ट्रोल बनेकी थिइन् । तर करिनाले आफ्नै अन्दाजमा सबै ट्रोलको सामना गरिन् ।
टिभि एक्ट्रेस र फिल्म एक्ट्रेस श्वेता साल्चे सेक्सी फिगर र डान्सिङ स्किल्सको लागि चिनिएकी छिन् । उनले स्मोकिङ र ड्रिंक गरिरहेको तस्बिर सोसल मिडियामा राखेपछि ट्रोलको शिकार बन्नुपर्यो । उनले स्मोकिङ र ड्रिंक गरेर आफ्नो बच्चालाई गलत म्यासेज दिएको भन्दै आलोचित बनिन् । श्वेताले पनि जवाफ फर्काइन्, ‘म स्मोक र ड्रिंक गर्छु । म मानिस भएकोले इमान्दार साथ भन्छु । मेरो बच्चा हुर्काउने विषयमा प्रश्न उठाउनु जरुरी छैन् । मैले कसैलाई ड्रिंक र स्मोक गर्नको लागि प्रेरित गरेको छैन् । न त मैले यसको लागि अरुको आलोचना गरेको छु । त्यै पनि म खराब आमा कसरी भए ?
सानिया मिर्जा टेनिस स्टार हुन् । उनले टेनिस खेलेर आफ्नो देशको नाम चिनाएकी छन् । उत्कृष्ट खेलाडीको रुपमा दरिएकी भए पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सानियाको मातृत्वमाथि प्रश्न उठाए । र उनी आलोचित बनिन् । जब उनी छोरालाई लिएर रेष्टुरेन्टमा पुग्थिन् । बच्चालाई रेष्टुरेन्टमा लिएर गएकोमा उनले नराम्रो कमेन्टको सामना गर्नुपथ्र्यो । सानियाले बच्चाको हेरचाह गर्ने तरिकामा प्रश्न नगर्नु राम्रो हुने वताउँदै आएकी छिन् ।
मिरा कपूरले प्राय छोरीसँग खिचाएको तस्बिर सोसल मिडियामा सेयर गरिरहेकी हुन्छिन् । उनीहरुको क्युट तस्बिरको सबैले तारिफ गर्ने गरेका छन् । तर एक समयमा मिरा पनि आलोचित बन्नुपर्यो । मिराले उनको छोरीको कपालमा टेम्पोररी कलर गरिदिएकी थिइन् । उक्त तस्बिरको लागि उनी सोसल मिडिया निकै आलोचित बनिन् र उनले स्पष्टिकरण नै दिनुपर्यो । मिराले छोरीलाई छाडेर काममा जाँदा पनि आलोचित बनेकी थिइन् । यस्तो कमेन्ट वर्किङ वुमनको लागि सहि हुँदैन् । जो आफ्नो अलग पहिचान बनाउन र घर खर्च चलाउनको लागि कामलाई महत्व दिन्छन् ।
नेपाली सिनेमा प्रश्न गर्न डराउँछ !
बलिउडपछि साउथ इन्डियन फिल्ममा डेब्यु गर्दै जान्हवी
सलमान खान फिल्म ‘रेस ४’ बाट आउट, सैफले साइन गर्ने